Muxuu ka yiri Kevin De Bruyne kulanka ay Liverpool ku booqan doonaan garoonka Anfield? – Gool FM
Muxuu ka yiri Kevin De Bruyne kulanka ay Liverpool ku booqan doonaan garoonka Anfield?
Dajiye November 9, 2019
( Manchester) 09 Nof 2019. Xiddiga khadka dhexe reer Belgian iyo kooxda Manchester City ee Kevin De Bruyne ayaa xaqiijiyay inuusan wax cabsi ah ka qabin jawiga garoonka Anfield, kahor kulanka ay Axada Liverpool ku wada ciyaari doonaan ciyaar ka tirsan kulamada 12-aad ee horyaal Premier League.
Sky Blues ayaa u baahanaan doonto inay guul gaarto ama barbaro gasho ugu yaraan kulanka Axada k dhici doono garoonka Anfield iyadoo hadii ay guuldaro la kulanto ay sii dheereysan doonaan wiilasha Jürgen Klopp hogaaminta horyaalka Premier League, wuxuuna farqiga dhibcaha gaari doonaa ilaa iyo 9 dhibcood.
Haddba Kevin De Bruyne ayaa wuxuu ka hadlay natiijooyinka liita kooxda Manchester City ee garoonka Anfield, wuxuuna u sheegay shabakada “Sky Sports” ee dalka England:
“Waxba igama gelin, duruufo badan ayaa go’aamin doona natiijada kulankan”.
“Kulanka Liverpool waa sida ciyaar kasta oo kale, waan ognahay in Reds ay tahay koox weyn, isla markaana ay ku horeyso dhanka hogaanka”.
“Xirfadlayaasha waxay rabaan inay ku hor ciyaaraan taageerayaal gaaraya 50, 60, 70 ilaa iyo 80,000, waxaad tababar sameyneysaa noloshaada oo dhan si aad u gaarto heerkan”.
Shaxda rasmiga ah kulanka kooxaha Chelsea Iyo Crystal Palace ee horyaalka Premier League oo la shaaciyey
Chelsea oo saddexda dhibcood Stamford Bridge kaga qaadatay kooxda Crystal Palace…+SAWIRRO